Lesona 13 : "Indro, havaoziko ny zavatra rehetra
Hodinihina mandritra ny herinandro: Apôk. 19:6-9; Jao.14:1-3; Apôk. 19:11-16; Apôk. 20:1-3;Jer.4:23-26; Apôk. 20:4-15; Apôk. 21:2-8.
Tsianjery: "Ary hoy Ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana: Indro, havaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoy koa Izy: Soraty, fa mahatoky sy marina ireo teny ireo." - Apok. 21:5
Catégorie : Lesona 13 : "Indro, havaoziko ny zavatra rehetra
Vaovao ratsy ho an'ireo nifanohana Babilonan'ny andro farany ny faharavan'ity rafi-pivavahana sandoka ity. Vaovao tsara anefa izany ho an'ny vahoakan'Andriamanitra (Apok. 19:1-7). I Babilôna no tompon'andraikitry ny fampahorian'ny fitondram-panjakana ireo vahoakan'Andriamanitra (Apok. 18:24), koa ny faharavany dia midika ho fanafahana sy famonjena azy ireo.
Nivaly ny vavaka nataon'ireo vahoakan'Andriamanitra tamin'ny namahana ny fanombohankase fahadimy, rehefa rava i Babilôna . Ny fitalahoan'izy ireo hoe: "Mandra-pahoviana, Jehovah" dia mampiseho ny fitomanian'ireo vahoakan'Andriamanitra nampijalina sy nampahoriana, nanomboka tamin'i Abela ka hatramin'ny fotoana hiarovan'Andriamanitra ny olony amin'ny farany "(Sal. 79:5; Hab. 1:2; Dan. 12:6,7). Manome toky ny vahoakan'Andriamanitra ny bokin'ny Apakalipsy fa hifarana ny faharatsiana sy ny fangejana ary ny fahoriana. Izao no fotoana hampiorenan'i Kristy ny fanjakany mandrakizay. Tsy ny fandravana an'i Babilôna amin'ny andro farany ihany no resahin'ireo toko ambiny ao amin'ny Apôkalipsy fa ny famongorana Satana sy ny faharatsiana rehetra koa. Hitantsika indray mitopy maso ao amin'izany koa ny fametrahana ny fanjakan'Andriamanitra izay maharitra mandrakizay.
Ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry (Apok. 19:6-9)
Miresaka momba ny fampakaram-badin'ny Zanak'ondry (and.7) sy ny fanasana fampakaram-bady (and.9) ny Apok. 19:6-9. Vakio koa ny Jao. 14:1-3. Ahoana no anehoan'ny fanasana fampakaram-bady ny fanirian'Andriamanitra antsika ho eo akaikiny mandrakariva tahaka ny sakaiza sy ankohonana?
Nandao ny fonenany tany an-danitra i Jesôsy 2000 taona lasa izay mba hanasa ireo mpanara-dia azy hanatrika ny fanasana fampakaram-bady (Mat. 22) aorian'ny hampakarany ny vadiny. Ny boky hafa ao amin'ny Baiboly sy ny fanahin'ny faminaniana dia mampiasa ny "ampakarina" ho sary an'ohatra maneho ny fiangonana; i Jerosalema kosa no asehon'izany ao amin'ny Apôk. 21:9,10. Izao no nambaran'i Ellen G. White: "Ny tanàna masina, Jerosalema vaovao izay renivohitra (...) no antsoina hoe `ampakarina, vadin'ny Zanak'ondry' (...) Ao amin'ny Apokalypsy, ny vahoakan'Andriamanitra dia lazaina fa `nasaina ho amin'ny fanasana fampakaram-bady'. Raha nasaina izy dia tsy mety ho ny ampakarina koa" - HM, tt. 440,441. Rehefa nandoa ny saran'ny otantsika teo Kalvary i Jesôsy ho fanehoana fa mendrika ilay ampakarina, dia i Jerosalema vaovao, Izy (Apok. 21:2), dia niverina any amin'ny tranon-dRainy mba hanomana toerana ho an'ireo mpanara-dia Azy (vakio ny Jao. 14:2,3), izay nasainy ho amin'izany fampakaram-bady izany. Mijanona eto an-tany ireo nasainy ireo miandry ny fiaviany indray; hiverina Izy amin'ny fiafaran'izao tontolo izao ary haka azy ireo ho any amin'ny tranon-dRainy.
Ambaran'ny Apôk. 19:8 fa omen'i Jesôsy fitafiana madio sady mangatsakatsaka ilay ampakarina. Maneho izany fa ireo olona asaina izay miditra ao anatin'ny tanana ireo dia tsy manambara ny fahamendrehan'ny asan'izy ireo. Ny fitafiana anaovany dia maneho ny "asa marina ataon'ny olona masina", asa izay vokatry ny firaisany amin'i Kristy izay mitoetra ao aminy. Araka izany dia maneho ny fahamarinan'i Kristy ireo fitafiana ireo ary maneho koa fa ny olony dia "mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesôsy " - Apôk. 14:12.
Fony tety an-tany i Jesôsy dia nitantara fanoharana iray mikasika ny fanasana fampakaram-bady (Mat. 22:1-14). Nanapa-kevitra ny hitafy ny akanjony ihany ny iray tamin'ireo nasaina fa tsy nanao ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady izay nomen'ny mpanjaka hanaovany. Rehefa hitan'ny mpanjaka io lehilahy io dia nibaiko ny mpanompony izy hanipy izany lehilahy izany any ivelan'ny trano.
Ambaran'ny Apôk. 3:18 amintsika fa ny "finoana an'i Jesôsy", ny akanjom-pahamarinan'i Kristy sy ny finoana ary ny odi-mason'ny Fanahy Masina no ilain'ny vahoakan'Andriamanitra indrindra izay miaina amin'ny andro farany. Ny fanasan'i Jesôsy ireo vahoakan'i Laodikia mba "hividy" Aminy ireo fanomezana ireo dia maneho fa mangataka takalon'izay atolony azy ireo Izy. Manary ny fahatsapana ho mahavita tena sy ny fitokian-tena isika ho takalon'ny fiainana feno fankatoavana an'i Kristy sy fitokiana Aminy, Izy ilay hany fanantenan'ny famonjena antsika.
Tsy vonjena amin'ny asa isika, inona anefa no "asa marina" ataonao izay mamaritra ny fiainana iainanao?
Ny fiafaran'ny Haramagedona (Apok. 19:11-16)
Ambaran'ny Apôk. 19:11-16 ny amin'ny anarana hafa iantsoana an'i Jesôsy : "Ny Tenin'Andriamanitra" - and. 13. Lazain'ny and. 15 fa "misy sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavany". lnona no ambaran'ireo zavatra ireo amintsika mikasika ny adin'ny Hara-magedona eo amin'Andriamanitra sy i Satana?
Mampiasa sary an'ohatra ireo toko sy andininy ireo hanehoana amintsika fa handresy i Jesôsy . Efa nandresy an'i Satana Izy tany an-danitra, tany an'efitra ary teo amin'ny hazo fijaliana, ary mbola handresy amin'ny fiaviany fanindroany.
"Vetivety dia, indro, miseho eny atsinanana rahona kely mainty, tokony ho antsasaky ny felatanana no habeny. Iny dia my ilay rahona manodidina ny Mpamonjy, izay toa voahodidin'ny haizina noho ny fahalavirany. Fantatry ny vahoakan'Andriamanitra fa io no famantarana ny Zanak'olona. Mangina sy feno fanajana izy raha mijery an'izany mihamanatona ny tany, mitombo hazavana sy voninahitra, mandra-pahatongany ho rahona fotsy lehibe, ny fanambaniny misy voninahitra toy ny afo mandeuona, ary eo amboniny ny avan'ny fanekena. Mitaingina soavaly toy ny mpandresy i Jesôsy . Tsy "Lehilahy ory", misotro ny kapoaka mangidin'ny henatra sy ny latsa Izy ankehitriny, fa tonga amin'ny maha-mpandresy any an-danitra sy ety an-tany Azy, hitsara ny velona sy ny maty. "Mahatoky sy marina" Izy, "ary amin'ny fahamarinana no itsarany sy iadiany". Ary "ny antokon'ny miaramila any an-danitra" (Apokalypsy 19:11,14) dia manaraka Azy. Amin'ny antema sy ny hiran'ny lanitra no anotronan'ireo anjely masina, andiany marobe tsy hita isa, Azy. Toa feno endrika mamirapiratra - "alinalina sy arivoarivo" - ny habakabaka. Tsy hain'ny penina tantaraina izany fisehoan-jauatra izany; tsy misy sain'olombelona mahatakatra ny famirapiratany" - HM, tt. 666-667.
Manoratra mikasika ny fiavian'i Jesôsy fanindroany koa i Paoly ao amin'ny 2 Tes. 1:8-10. Amin'izay fotoana izay dia horavana avokoa ireo fitondram-panjakana sy fahefana ara-pivavahana eto an-tany izay niodina tamin'i Jesôsy , fa ireo vahoakan'Andriamanitra kosa hovonjena mandrakizay.
Miresaka mikasika fanasana anankiroa ny Apôk 19:9,17,18. Raha vahiny nasaina ho amin'ny fanasana voalohany ianao dia manana sakafo; raha amin'ny faharoa kosa dia ianao no ho sakafo! Ny fahasamihafana misy eo amin'ireo fanasana ireo dia maneho amintsika fa mahakasika ny olon-drehetra eto an-tany ny ady ifanaovan'Andriamanitra sy i Satana. Inona no lesona azontsika sintonina avy amin'ireo fanasana ireo momba ny tokony hitoerana ho mahatoky amin'ny fahamarinan'ny Baiboly sy ny asa izay nampanaovin'Andriamanitra antsika amin'ny andro farany?
Ny arivo taona any an-danitra (Apok. 20:1-3)
Asehon'ny Apôk. 20:1-3 sy ny Jer. 4:23-26 antsika izay hitranga mandritra ny arivo taona, rehefa hoentin'i Jesôsy ho any an-danitra ny olony. Inona no hitranga eto an-tany amin'izay fotoana izay? Tahaka ny ahoana no hamatorana an'i Satana?
Ny fiavian'i Kristy fanindroany no manamarika ny fiandohan'ny arivo taona. Amin'izay fotoana izay dia hofatorana i Satana sy ireo anjely lavo niaraka taminy. Tandidona ihany ny gadra vy hamatorana azy satria tsy mety fatorana ny fanahy. Ny toe-javatra no mamatotra azy. Nampahory sy nandripaka ireo ratsy fanahy teto an-tany ireo loza fito, ka nahatonga izany hanana endrika mikorontana tahaka izay nisy talohan'ny Famoronana (Gen. 1:2). Ho tahaka izany ny endriky ny tany ka hanjary figadrana ho an'i Satana izany mandritra ny arivo taona. Koa satria tsy hisy olombelona halaina fanahy sy hampahoriana intsony, dia hijery ny vokatry ny fikomiana nataony tamin'Andriamanitra sisa no azon'i Satana sy ireo mpiara-miasa aminy ratsy fanahy hatao amin'izany.
Miresaka momba izay hataon'ny olona masina mandritra ny arivo taona ny Apôk. 20:4-6. Aiza no misy azy ireo?
Honina any amin'ny toerana izay namboarin'i Jesôsy ho azy ireo vahoakan'Andriamanitra mandritra ny arivo taona. Mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana tahaka ny mpanjaka sy mpisorona ary loholona izy ireo, hitsara ny olona rehetra nonina tety arnbonin'ny tany. Nanome toky ireo mpianany i Jesôsy fa "hipetraka amin'ny seza fiandrianana roa ambin'ny folo ka hitsara ny firenen'Isiraely roa ambin'ny folo" izy ireo (Mat. 19:28). Nambaran'i Paoly fa hitsara izao tontolo izao ireo olona masina (1 Kôr. 6:2,3).
Mahakasika ny fahamarinan'ny asan'Andriamanitra izany fitsarana izany. Namelona fisalasalana tao am-pon'ny olona mikasika ny toetran'Andriamanitra sy ny fitondrany ireo voary nohariany i Satana nanerana ny tantara. Mandritra ny arivo taona no • hamelan'Andriamanitra ireo voavonjy hahita ny firaketana ny tantara mba hahazoany valiny amin'ireo fanontaniana rehetra momba ny fahamarinan'ny fanapahan-keviny mikasika ireo very, tahaka izany koa ireo fanontaniana mikasika ny amin'izay nataon'Andriamanitra ho azy ireo. Amin'ny fiafaran'ny arivo taona dia ho voavaly avokoa ireo fanontanian'izy ireo momba ireo fanapahan-kevitra feno hitsiny noraisin'Andriamanitra. Ho hitan'ny vahoakan'Andriamanitra fa lainga avokoa izay nambaran'i Satana mikasika Azy, rehefa izay dia hanatri-maso izay hataon'Andriamanitra amin'i Satana sy ireo mpanara-dia azy izy.
Lanitra vaovao sy ny tany vaovao (Apok. 21:2-8)
Rehefa mifarana ny arivo taona dia haringan'Andriamanitra tanteraka ny fahotana, ary havaoziny indray ny tany honenan'ny vahoakany. Ho tahaka ny ahoana ilay tany vaovao?
Nahita "lanitra vaovao sy tany vaovao" i Jaona ao amin'ny Apôk. 21:1. Ninoan'ny Jiosy fa misy telo ny lanitra: ny habakabaka, ny habakabaka misy ny kintana ary ny toerana izay onenan'Andriamanitra (vakio ny 2 Kor. 12:2). Ny lanitra voalohany no resahin'i Jaona ao amin'ny Apôk. 21:1: havaozin'Andriamanitra ny habakabaka sy ny rivotra hiainantsika. Ny hoe "vaovao" amin'ny teny grika dia "kainos" (ki-`nos), izay midika hoe nohavaozina ho tsara kokoa noho izay teo aloha. Tsy hoe hanamboatra tany vaovao indray Andriamanitra fa hodioviny amin'ny afo ity planeta ity ka haveriny amin'ny endriny tany am-pamoronana (2 Pet. 3:10-13).
Mahaliana tokoa fa ny zavatra voalohany nosoratan'i Jaona momba ny tany dia ny tsy hisian'ny ranomasina intsony. Ny filazan'i Jaona ny amin'ny "ranomasina" dia maneho fa ny ranomasina izay nanodidina azy tao Patmo no tao an-tsainy, izay toy ny tandindon'ny fisarahana sy fahoriana. Midika ho fahafoanan'ny fahoriana sy fijaliana aminy ny tsy fisian'ny ranomasina intsony any amin'ny tany vaovao.
Vakio ny momba ny tany vaovao ao amin'ny Apok. 21:2-8 sy Apok. 7:15-17. Ahoana no mampitovy ny tany vaovao amin'ny sahan'i Edena ao amin'ny Gen. 2 ?
Hiaina lavitry ny fahoriana sy ny fahafatesana eto an-tany ireo vahoakan'Andriamanitra rehefa hohavaozina indray ny tany. Hiara-monina mandrakizay amin'ireo olony Andriamanitra. Hahatonga ny tany ho tempoly ny fiarahany monina amintsika.
Tsy hisy intsony ny ranomaso sy ny fahafatesana, ny alahelo na ny fahoriana izay vokatry ny fahotana avokoa. Rehefa hofongoran'Andriamanitra tsy hisy intsony ny fahotana, dia "efa lasa ny zavatra taloha" - Apôk. 21:4.
Takatr'i Maria sy Marta fa manana fahefana hanavao ny zava-drehetra Andriamanitra. Rehefa nodimandry i Lazarosy anadahiny, dia izao no nolazain'i Marta tamin'i Jesosy: "Tompoko, raha teto Hianao, dia tsy maty ny anadahiko" - Jao. 11:21. Fantatr'izy mirahavavy ireo fa tsy manana fahefana ny fahafatesana rehefa eo Jesosy. Tahaka izany koa, rehefa hiara-miaina amintsika ao amin'ny tany vaovao Andriamanitra dia hanafaka antsika amin'ny fahoriana sy ny fijaliana izay hitantsika sy iainantsika amin'izao fiainana izao. Manome toky antsika ny amin'izany fanantenana izany i Jesosy.
Jerosalema vaovao (Apok. 21:9-21)
Manoritsoritra ny renivohifry ny tany vaovao iJaona ao amin'ny Apok. 21:9-21: Jerosalema vaovao. Tahaka ny ahoana ny endriky ny tanana avy aty ivelany?
Antsoina hoe ampakarina ilay Jerosalema vaovao, izay vadin'ny Zanak'ondry. Jerosalema vaovao no toerana izay honenan'i JesOsy miaraka amin'ny olony. Mifefy manda lehibe izany, ary manana vavahady roa ambin'ny folo. Misy vavahady telo eo amin'ireo manda efatra manodidina ny tanana, izay midika fa afaka miditra ao amin'izany tanana izany ny avy amin'ny vazan-tany rehetra. Tsy misy olona ferana tsy ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ao Jerosalema vaovao.
Miendrika goba izany tanana izany, 12000 stadio ny lavany sy ny sakany ary ny velarany sy ny haavony. Ahitana zoro 12 ny goba. Araka izany, ny fitambaran'ny refin'ilay tanana dia 144.000 stadio, izay maneho ireo olona 144.000 voalaza fa tsy handalo fahafatesana amin'ny fiavian'i Jesosy fanindroany. Tao amin'ny tempoly tamin'ny andron'ny TT dia niendrika goba koa ny efitra masina indrindra (1 Mpanj. 6:20). Araka izany, Jerosalema vaovao dia ho ivon'ny fiankohofana amin'Andriamanitra. Ny mpisoronabe irery ihany no nahazo niditra tao amin'ny efitra masina indrindra tao amin'ny tempoly tety an-tany. Ao Jerosalema vaovao kosa dia tombontsoa lehibe homena ny voavonjy rehetra izany.
Inona no mampitovy ny ao anatin'i Jerosalema vaovao, araka izay hita ao amin'ny Apok. 21:21-27 ; 22:1-5, sy ny sahan'i Edena? Midika inona ny hoe "tsy hisy ozona intsony" ao amin'izany tanàna izany (Apok. 22:3)?
Mivoaka avy eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ny onin'ny ranon'aina ka mankeo afovoan'ny lalamben'ny tanana (Apok. 22:1,2; Gen. 2:10). Maniry eo amin'ny laniny roa amin'ny ony ny hazon'aina. Hahazoan'ny vahoakan'Andriamanitra fanasitranana ny ravin'izany hazo izany 22:2). Tsy misy aretina intsony ao amin'ny tany vaovao, saingy hihinana izany ravina izany ny vahoakan'Andriamanitra hanasitranana ny ratra nateraky ny fahotana tamin'ny lasa.
Vakio ny "Misaona ny tany", toko 41 sy ny "Mifarana ny ady", toko 42 ao amin'ny HM.
Mifarana amin'ny teny fikasana izay nanombohana azy ny bokin'ny Apokalipsy: ny fampanantenana ny amin'ny fiverenan'i Jes6sy indray sy ny fanjakany izay maharitra mandrakizay. Ny fiavian'i Jesôsy no ampahany manan-danja indrindra ao anatin'io boky io.
Ho avy tsy ho ela i Jesôsy ; miandry Azy hatrany isika amin'izao fotoana izao. Raha eo am-piandrasana isika dia tokony ho takatsika mazava ny hafatra ampitain'ny bokin'ny Apôkalipsy. Ny famerimberenana ny famakiana io boky io no hahazoantsika izany mandra-pahatonga ny fiafaran'ny tantaran'ny tany. Mampahatsiahy antsika zava-manan-danja maromaro ireo hafatra ao amin'ny Apôkalipsy, raha eo am-piandrasana isika: (1)Tokony hibanjina an'i Jesôsy ilay fanantenantsika isika. (2) Jesôsy no vahaolana ho an'izay irin'ny fontsika eo amin'ny fiainana. (3) Eo am-pelatanan'i Jesôsy ny hoavin'ny tany sy ny antsika.
Mampahatsiahy antsika zava-dehibe iray tokony hataontsika mialoha ny fiafaran'ny tantaran'ny tany ny bokin'ny Apokalipsy. Nomen'Andriamanitra antsika ny iraka amin'ny hilazana amin'ny olon-drehetra eto an-tany ny hafatry ny fiverenany tsy ho ela. Tsy tokony hitomoe-poana isika eo am-piandrasana fa hizara ny hafatra manokana avy amin'Andriamanitra ho an'izao andro izao. "Ny Fanahy sy ny ampakarina manao hoe: Avia" - Apôk. 22:17. Tsy rnaintsy miara-miasa amin'ny Fanahy sy ny ampakarina isika amin'ny fizarana ny fanasan'Andriamanitra, fanasana izay antsoin'ny Baiboly hoe filazantsaran'i Jes6sy. Tsy maintsy manambara izany vaovao mahafaly izany amin'ny olon-drehetra ety ambonin'ny tany isika.
1. Eritrereto ny amin'ny arivo taona sy ny fitsarana amin'ny fiafaran'izany. Rehefa tapitra ny arivo taona hamalian'Andriamanitra ny fanontanian'ireo voavonjy, izay vao hanao ny famaizana ireo very Izy. Inona no ampianarin'izany momba ny toetran'Andriamanitra?
2. Mampanantena fitahiana ho an'ireo izay mihaino sy mamaky ary mitandrina ny tenin'ny faminaniana ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ny Apôk. 1:3. Raha eo am-pamaranana ny fandinihana ity boky ity isika, Inona avy ireo zava-baovao hitanao ka ilainao tandremana sy ankatoavina?